Exudative pericardial effusion - को pericardium को भित्री सतह अस्तर को झिल्ली मा सुनिंनु द्वारा विशेषता रोग। प्रवाह Exudative pericarditis को प्रकृति द्वारा तीव्र वा पुरानो छ।
रोग serous, hemorrhagic, purulent, fibrinous र serosanguineous हुन सक्छ। Exudative fibrinous pericarditis मा pericardium मा fibrin फिलामेंट्स को जम्मा हुन्छ, र pericardial गुहा मा तरल पदार्थ केही मात्रामा accumulates। सामान्यतया, यो pericardial गुहा मा लगभग 20-40 एमएल तरल पदार्थ को समावेश छन्।
तीव्र pericarditis प्रतिक्रिया अवधिमा तरल रगत अंश को pericardial गुहा मा उन्नत सेलुलर exudation सँगसँगै छ। को भडकाऊ प्रक्रिया नाटकीय यसको समारोह deteriorates जो subepicardial तह, उत्प्रेरित गर्न सक्छ जब अवस्थामा।
अक्सर pericardial गुहा मा तरल पदार्थ को अचानक संग्रह हृदयजन्य आघात को symptomatic संकेत छ जो हृदय tamponade, हुन सक्छ:
हृदय छिटो धडकन;
dyspnea प्रकार को लागि श्वसन विकार;
सानो र ठूलो परिसंचरण को शिरापरक प्रणालीमा दबाब बढेको;
सिस्टोलिक रक्तचाप मा घटाउनुहोस्।
resorption Exudative तरल जो बारी मा आंशिक वा पूर्ण imperforate pericardial गुहा सक्छ fibrin, मिलेर, खत ऊतक गठन हुन सक्छ। सामान्यतया खत भएको आलिन्द क्षेत्र मा, माथिल्लो र तल्लो vena कावा को confluence मा, atrioventricular नाली नजिक गठन गरिएको छ।
pericardial effusion यस्तो तीव्र प्रकृति संग गंभीर जटिलताओं, को pericardium को calcification फलस्वरूप "पत्थर हृदय" भनिएको छ जो निम्त्याउन सक्छ। Exudative pericarditis को रोग प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु हृदय ventricles गर्न diastolic रगत लाभ को एक उल्लङ्घन हो। Exudate को pericardial गुहा मा संचित वा constrictive pericarditis को उपस्थिति शिखर मा subepicardial र subendocardial तहहरू को अवरोध गर्न जान्छ। दुर्लभ अवस्थामा मा, pericardium को फाइब्रोसिस diastole अवधिमा उभडा ventricle सुनिश्चित जो मार्फत मनमा रगतको सामान्य वितरण विस्तार खण्ड, हुन सक्छ।
यो घटना fenestration (को "खुला विन्डो") भनिन्छ। गोलाकार पेशी पत्र प्रदान गर्दछ जो सिस्टोलिक चरण, साधारण, ग्रस्त छैन। हृदय गर्न शिरापरक प्रतिफलको दीर्घकालीन उल्लंघन संग पल्मोनरी धमनी मा रगत को एक ठहराव छ। जब शिरापरक stasis तरल को systemic परिसंचरण प्रणालीमा आसपास ऊतकहरुमा extravasation छ।
Pericardial effusion: कारण (etiologies)
Exudative pericarditis सबैभन्दा बारम्बार कारण एक शाही सेना-समावेश भाइरस (एक र बी), echovirus, इन्फ्लूएंजा एक र विभिन्न प्रकृति (pneumococci, staphylococci, streptococci, mycobacteria क्षयरोग र Fungi) को जीवाणु संक्रमण हो।
हेरिएको रोग systemic रोगहरु (SLE, वा Libman-बोरा रोग, बाथ जोइन्टहरूमा, rheumatism, systemic scleroderma) र genitourinary प्रणाली (uremic pericarditis) को विकार को पाठ्यक्रम जटिल गर्न सक्नुहुन्छ। Pericardial effusion आईसीडी pericardiotomy गरेपछि वा myocardial infarction, भनिन्छ जो एक प्रारम्भिक जटिलता रूपमा विकास हुन्छ भनी एक प्रकटीकरण postperikardialnogo सिंड्रोम हुन सक्छ Dressler गरेको सिंड्रोम। सामान्यतया, यो जटिलता कडाई परिभाषित समय फ्रेम मा, अर्थात्, 15 दिन देखि2महिना उत्पन्न हुन्छ।
gidralizin, phenytoin, anticoagulants, कारण बारम्बार आवेदन procainamide, रेडियोथेरेपी: कहिलेकाही Exudative टास्ने pericarditis कारण केही लागूऔषधको इन्जेशन गर्न उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। स्तन क्यान्सर, फोक्सो, sarcoma, लिंफोमा: एक ठूलो pericardial effusion effusion सामग्री पत्ता जब ती अवस्थाहरूमा, कारण ट्यूमर को मेटास्टेसिस मा खोजे गर्नुपर्छ। यी अवस्थाहरूमा, सामान्यतया hemorrhagic exudates, कम serous।
त्यहाँ Exudative pericarditis, भनिन्छ जो hemopericardium एक विशेष प्रकारको छ। को छाती क्षेत्रमा घाइते रगत पैदा myocardial infarction पछि विरामीहरु मा, प्रक्षेपण को हृदयमा मर्मज्ञ हुँदा discontinuities infarction मा, या aortic aneurysm dissecting, को pericardial गुहा भरिन्छ यो अवस्था हुन्छ। रोग अज्ञात causative कारक लागि भयो भने, त्यसपछि यसलाई गैर विशिष्ट वा idiopathic को एक समूह पर्छ।
साथै, छोराछोरीलाई मा pericardial effusion पनि, कहिलेकाहीं। यो कारण हो: गलसुआशोथ र staphylococcal संक्रमण, क्षयरोग, एचआइभी संक्रमण, अनियन्त्रित दबाइहरु, ट्यूमर, आघात, हृदय नजिकै, मृगौला विफलता, हृदय शल्य चिकित्सा।
Pericardial effusion: निदान र नैदानिक सुविधाहरू
Exudate को pericardial गुहा र नीरस दुखाइ प्रकट एक बैठक स्थिति, छिटो धडकन मा कम छ जो apnea प्रकार, मा हृदय, असामान्य साँस संग aching मा संचित। सुक्खा खोकी कारण गर्न ट्रेकिआ र bronchi मा तरल द्वारा exerted दबाब।
विरामीहरु को सामान्य अवस्था ढिलो गति मा pericardium मा तरल घटक को गठन को दर मा निर्भर गर्दछ - सन्तोषजनक स्थिति जब तीव्र - मध्यम र गंभीर।
परीक्षा मा, रोगी सुविधाहरू Exudative pericarditis निम्न पत्ता सकिन्छ: छाला, mucosa cyanotic ओठ, तल्लो limbs को edema, acrocyanosis पीला।
को छाती को निरीक्षण क्षेत्र विषमता पत्ता सक्छ, बायाँ तर्फ यो pericardial exudate मात्रा मा क्लस्टर 1 भन्दा बढी लीटर पुग्छ भने मात्र सम्भव छ, वृद्धि गर्न सकिन्छ। Palpation गर्दा सुविधा जार्डिन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ apical आवेग कारण exerted दबाब, भित्र संचित तरल गर्न, माथिको र आन्तरिक विस्थापित भएको छ।
, तल (तल्लो प्रभाग मा) अगाडि वा मध्य axillary लाइन मा, दोस्रो र तेस्रो intercostal रिक्त स्थान मा मध्य-clavicular लाइन, सही तल्लो प्रभाग मा, SCR को दाँया (मध्य गर्न बायाँ: टक्कर हृदयका सापेक्षिक सुस्ती को सीमाहरु को विस्तार सबै दिशामा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यसरी सीमा संक्रमण hepatic सुस्ती गर्न सट्टा एक प्रत्यक्ष सामान्य एक obtuse कोण गठन -klyuchichnoy लाइन)। यो सबै रोगी pericardial effusion छ संकेत हुन सक्छ।
Auscultatory ढाँचा: को को धारिलो कमजोर हृदय सुनिन्छ Botkin-Erb र xiphoid प्रक्रिया मा, हृदय शिखर मा। हृदयको आधार सुने छन् मा ठूलो टन हृदय Exudative तरल पदार्थ माथिको विस्थापित र पिछडिएको छ भन्ने तथ्यलाई कारण छन्। हल्ला pericardial घर्षण, सामान्यतया auscultation नै प्रकट गर्दैन। रक्तचाप हृदय उत्पादन मा कमी को पृष्ठभूमिमा विरुद्ध, अस्वीकारको छ।
तरल पदार्थ को संग्रह बिस्तारै समय हुन्छ भने, लामो समय को लागि हृदयको यांत्रिक काम कारण pericardium यो मामला मा बिस्तारै विस्तार भन्ने तथ्यलाई छैन परेशान छ। को pericardial effusion मा तरल पदार्थ को एक तीव्र संग्रह र क्षेत्र को मामला मा tachycardia, को परिसंचरण सर्कल (ठूलो र सानो) मा भीड घटना संग नैदानिक हृदयघात मिलती।
निम्न Exudative pericarditis द्वारा विशेषता ईसीजी डाटा विश्लेषण आधारमा। जब भीड Exudative तरल पदार्थ थप Calculate भोल्टेज कमी जटिल र बिजुली हेरफेर बाहिरु निलय परिसर QRS। Radiographically हृदय को छाया र क्षेत्रीय लहर को कमजोर क्षेत्रमा वृद्धि अवलोकन। भास्कुलर बन्डल छोटो छैन। कहिलेकाहीं यो बायाँ pleural गुहा मा effusion पत्ता लगाउन सम्भव छ।
Exudative तरल पदार्थ को pericardial गुहा संग्रह मा इको ईसीजी को को पछिल्लो पर्खाल को क्षेत्र मा, हृदय को बाँया ventricle को फिर्ता देखि अवलोकन छ। जब Exudative तरल पदार्थ को ठूलो मात्रा, यो हृदयको सही ventricle अगाडि देखाउँछन्। को pericardium मा संचित तरल पदार्थ को संख्या मा epicardium र pericardium देखि परिलक्षित प्रतिध्वनिहरु बीच अन्तराल न्याय छ।
रोग को कारण एक कारक स्थापना
(जस्तै, रगत) Exudative pericarditis लगे tuberculin छाला परीक्षण, serological अध्ययन को संक्रामक प्रकृति हटाउन, विशिष्ट एंटीबडी (एचआईभी) को उपस्थिति को लागि Exudative फारम pericarditis virological परीक्षा लगे entailing, परीक्षण एक जैविक सामाग्री गति को etiologic कारक स्थापित गर्न फंगल संक्रमण।
म्यकोप्लास्मा संक्रमण, uremia नजर सीरम creatinine र यूरिया संग - पनि systemic संयोजी ऊतक रोगहरु सञ्चालन प्रतिरक्षाविज्ञानी अनुसन्धान, विरोधी-आणविक एंटीबडी, rheumatoid कारक titre antistreptolysin-हे, चिसो agglutinin उपस्थिति निर्धारण।
अन्तर निदान Exudative pericarditis को
तीव्र myocardial infarction, vasogenic दुखाइ prollaps mitral वाल्व, शुष्क pleurisy: Pericardial effusion निम्न रोग संस्थाहरू संग भिन्नता छ।
हृदय को मांसपेशी (myocardium) मा चयापचय उत्पादनहरु को संग्रह कारण तीव्र myocardial miokarada दुखाइ सिंड्रोम मा। आफूलाई केन्द्रीय hemodynamics उल्लङ्घन प्रकट कि नैदानिक र प्रयोगशाला संकेत को एक नम्बर सँगसँगै दुखाइ सिंड्रोम myocardial infarction arrhythmias, myocardium मा प्रवाहकत्त्व प्रक्रियाहरु, ठहराव घटना एउटा सानो सर्कलमा ईसीजी परिवर्तनहरू मा (पल्मोनरी) myocardial infarction को परिसंचरण विशेषता प्रक्रियाहरु। myocardial infarction को जीव रसायन विश्लेषण हृदय isoenzymes को गतिविधि संकेत गर्छ।
जब सुख्खा pleurisy दुखाइ र auscultatory परीक्षा घर्षण pleura मा साँस, खोकी, शरीर को स्थिति, हल्ला सम्बन्धित सुविधाहरू, भन्दा अन्य भएको महत्त्वपूर्ण तथ्य छ माथि-वर्णन, यो सुक्खा pleurisy फिलिम electrocardiograms कुनै परिवर्तन छन् कि उल्लेख गर्नुपर्छ । - Exudative देखि aortic aneurysm विपरीत यो कारण एक आनुवंशिक रोग छ भन्ने तथ्यलाई मा हुन्छन् pericarditis Marfan सिंड्रोम वा atherosclerotic lesion यसको भित्री खोल। केही अवस्थामा यो पुरानो pericardial effusion गठन हुन सक्छ।
कुनै irradiation, dysphagia, कर्कश आवाज, dyspnea, खोकी, द्वारा mediastinum को सङ्कुचन कारण संग, माथिल्लो छाती मा दुखाइ: Symptomatic aortic aneurysm नै प्रकट निम्नानुसार। Aortic aneurysms को thoracic गुहा, echocardiography र aortography को रेडियोधर्मी परीक्षा प्रयोग निदान छन्।
aortic aneurysm दुखाइ dissecting गर्दा अचानक, को छाती मा देखापर्ने महाधमनी साथ irradiation झुकाव छ। एकै समयमा, विरामीहरु प्राय एक प्रमुख धमनी मा लहरहरु को लोप, गम्भीर अवस्थामा छन्। Auscultation aortic वाल्व अपर्याप्तता auscultated। aortic aneurysm dissecting गर्दा निदान उपाय हो: transesophageal अल्ट्रासाउंड र छाती गुहा को Computed टोमोग्राफी।
तपाईं ध्यान के गर्नुपर्छ
यसलाई विस्तृत myocarditis, को संकेत संग हृदय गुहा को वृद्धि सँगसँगै छ जो संग pericardial effusion आईसीडी 10 अलग महत्त्वपूर्ण छ circulatory विफलता। Symptomatic myocarditis निम्न तरिकामा नै प्रकट: यो हृदय क्षेत्र, दिल ताल disturbances मा एक दुखाइ anginal प्रकृति, heaviness को भावना हुन सक्छ।
Auscultation auscultated म्युटिङ हृदय पहिलो र चौथो हृदय ध्वनि को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निम्न सुविधाहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ को विवरण, bifurcated हुन सक्छ, सुनिन्छ: को बिकृति पी लहर, सेल मा परिवर्तन दाँत आर voltages, टी लहर चपटे गर्न सकिन्छ। हृदय Chambers को echocardiogram उल्लेखनीय वृद्धि र समयमा पर्खालहरु को contractility घटाउनुहोस्।
Exudative pericarditis को उपचार मा चिकित्सकीय उपायहरु
आशङ्का तीव्र pericardial effusion अस्पताल मा रोगी hospitalize गर्न जरुरी आवश्यकता छ। त्यहाँ गंभीर दुखाइ, ट्याब्लेट फारममा आवश्यक निर्धारित एस्पिरिन, हरेक तीन वा चार घण्टा अन्तराल भित्र एक ग्राम को औषधिको खुराक छ भने। यो एस्पिरिन ट्याब्लेटको 25 -50 मिलीग्राम को indomethacin खुराक, खानेपानी, हरेक छ घण्टा एक अन्तराल थप्न सम्भव छ।
यदि त्यहाँ2एमएल वा narcotic analgesics (morphine) 1% को एकाग्रता, एकचोटि dosing वा आधा milliliters, अन्तरालहरू हरेक छ घण्टा intramuscular प्रशासन लागि 50% dipyrone थप समाधान गर्ने सल्लाह दिन्छन् कि सङ्केत गर्छ छन्। जब अवस्था वा अनिद्रा को पृष्ठभूमि विरुद्ध psychomotor आन्दोलन "Sibazon" ( "म") एक दिन नियुक्त भित्र, 5-10 मिलीग्राम को औषधिको खुराक तीन वा चार पटक।
को भडकाऊ प्रक्रिया भन्दा सामान्यतः "Prednisolone" 20-80 मिलीग्राम / दिन को औषधिको खुराक को व्यवहार मा प्रयोग हटाउन। केही कदम भित्र। उच्च खुराक मा glucocorticoids संग उपचार पछि को औषधिको खुराक दुई मा, बिस्तारै कम गर्नुपर्छ भन्ने peculiarity र आधा milligram हरेक दिन संग, 7-10 दिन को पाठ्यक्रम मा बाहिर छ।
कसरी लामो pericardial effusion उपचार छ? उपचार दुई वा तीन हप्ता बारेमा रहन्छ, र कहिले काँही तपाईं कडाई गवाहीलाई मा, धेरै महिना सुत्छन् छ। उपचार को विशिष्टता pericardial effusion कारण कि etiological कारक मा निर्भर गर्दछ।
भाइरल etiology पहिचान मा हर्मोन यसरी नियुक्त गर्न, गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ एजेन्ट नियुक्त छन्। जस्तै, रोगनाशक ओषधि जी औषधिको खुराक 2,00,000 यू / किलो / दिन एन्टिबायोटिक सल्लाह दिन्छन्, - Pericarditis Streptococcus निमोनिया कारण हो जो, फरक व्यवहार हो। छैन भन्दा कम दस दिन - intravenously दिइएको खुराक छ इंजेक्शन, उपचार को अवधि विभाजन गरिएको छ।
साथै, pericardial effusion निदान भने, यो pericardiocentesis (प्रक्रिया बाहिर एक विशेष सुई प्वाल पार्ने काम pericardium मा क्रममा विश्लेषणका लागि सेवन तरल गर्न लगे जो प्रकृति, मा चिकित्सकीय र निदान भएको) सञ्चालन गर्नुपर्छ। कि गति यो रोग को एजेन्ट को एक विशेष प्रकार पत्ता लगाउन क्रममा exudate लगे पछि, यो जीवाणुरोधी तयारी गर्न यसको संवेदनशीलता विश्लेषण निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। 14 21 दिन देखि - यदि यो Staphylococcus Aureus फेला छ, तैयार सामान्यतया एक ग्राम नसों अन्तरालहरू हरेक बाह्र घण्टा चिकित्सकीय दर को "Vancomycin" खुराक प्रबन्ध छ।
कहिलेकाहीं, फंगल संक्रमण pericardial effusion हुन सक्छ। यस मामला मा उपचार बाहिर छ "Amphotericin"। प्रारम्भिक खुराक 1 मिलीग्राम, एक प्रतिशत5प्रतिशत र मात्रा मा पचास milliliters बराबर, parenterally प्रबन्ध (नस मार्फत) यसको ग्लूकोज समाधान, 30 मिनेट ड्रिप थियो। एक रोगी दबाइ राम्रो सहन गरिएको छ भने, dosing शासन परिवर्तन जस्तै निम्नानुसार: एक घण्टा भन्दा बढी 0.2 मिलीग्राम / किलो। त्यसपछि, यो औषधिको खुराक बिस्तारै माथि आधा वा एक microgram / दिन वृद्धि गरिएको छ। सकारात्मक प्रभाव को शुरू अघि तीन वा चार घण्टा।
साइड प्रभाव "Amphotericin", ध्यान जो गर्नुपर्छ - nephrotoxic गुर्दे समारोह को अनुगमन जडानमा आवश्यक छ। pericardial effusion दबाइ, त्यसपछि उपचार रणनीति यी एजेन्ट थप स्वागत गर्न उद्देश्य बन्द गरिएको छ र थप corticosteroids संग संयोजन मा nonsteroidal विरोधी-भडकाऊ एजेन्ट को प्रयोग नियुक्त गरिएको छ कारण उत्पत्ति भने, तिनीहरूले सामूहिक, तीव्र रिकभरी परिणाम विशेष गरी तपाईं रोग को प्रारम्भिक दिन देखि नियुक्त गरिएको छ भने।
गलसुआशोथ - एक गम्भीर रोग हो
वयस्क मा Mumps
यो औंलाहरुमा चरण दुख्छ। कि के अर्थ राख्छ?
को घाँटी कति चाँडो निको पार्न? घर मा, यो धेरै सजिलो छ!
समीक्षा र फोटो: लागि मैनीक्योर र पेडीक्योर व्यावसायिक उपकरण
स्विडिश कस्मेटिक्स: दृढ, समीक्षा, मूल्याङ्कन। स्विडिश अंकित
एक सुगंधित स्ट्रबेरी वन - कसरी उपयोगी छ?
मोन्टेनेग्रो, Igalo। Igalo, मोन्टेनेग्रो मा छुट्टी। होटल Igalo
सुक्खा र pericardial effusion: लक्षण, निदान र उपचार
कला न्यायिक अभ्यास। 558 को नागरिक कोड को